एनआरएन स्वीजरल्याण्डको महिला फोरमद्वारा वीर अस्पताललाई ह्विलचेयर हस्तान्तरण – News Portal of Global Nepali
एनआरएन स्वीजरल्याण्डको महिला फोरमद्वारा वीर अस्पताललाई ह्विलचेयर हस्तान्तरण
लण्डन। गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्वीजरल्याण्ड, महिला फोरमले बुधवार नेपालको पहिलो अस्पताल वीर अस्पतालमा सहयोग स्वरुप ह्विलचेयर हस्तान्तरण गरेको छ । वीर अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रममा एनसीसी स्वीजरल्याण्ड महिला फोरमका सल्लाहकार एवं पूर्व उपाध्यक्ष विजया भट्ट र गैरआवासीय नेपाली संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. हेमन्त दवाडीले महिला फोरमको तर्फबाट अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. सरोज शर्मालाई ह्विलचेयर हस्तान्तरण गरे ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्वीजरल्याण्डका महिला संयोजक शुभ एल्मर लामाको संयोजनमा अस्पताललाई १२ वटा ह्विलचेयर प्रदान गरिएको हो ।
विशेषगरी वीर अस्पतालमा आउने सर्वसाधारण बिरामीको सेवाका निम्ति सो सहयोग गरिएको हो । कार्यक्रमको सुरुवातमा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. हेमन्त दवाडीले एनआरएनए तथा महिला फोरमको बारेमा प्रष्ट पारिन् ।
कार्यक्रममा डा. शर्माले सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तरता रहने आशा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा अस्पतालका तर्फबाट शर्मा सहित नर्सिङ विभागका प्रमुख रिना श्रेष्ठ र नाक कान घाँटी विशेषज्ञ डा. जयेन्द्र प्रधानको उपस्थिती रहेको थियो । यस्तै संघका सचिवालय सदस्यहरु, तथा अन्य सञ्चारकर्मीको उपस्थिती रहेको थियो ।